Semutungamiriri wekushambadzira, Andrew Follett anga atangisa akawanda magadzirirwo epfungwa… achinyatso tumira tsamba kune shamwari, vemhuri nevavanoshanda navo, vobva vanyora mhinduro. Maitiro acho akatora nguva yakawanda uye aisabatsira zvakanyanya. MunaNdira, Andrew akaenda kune shamwari yake pa DevBridge nezve iyo pfungwa. DevBridge yakafunga kudyidzana naAndrew uye kusimudzira kwakatanga munaKurume. Pfungwa Mhinduro yakatangwa muna Chivabvu.